Xariirka Degdega ah ee Expedia si looga caawiyo Texas abuuritaanka ganacsi isla waqti isku mid ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Xariirka Degdega ah ee Expedia si looga caawiyo Texas abuuritaanka ganacsi isla waqti isku mid ah
Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Waajib ah • Ammaanka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Expedia waa bog caalami ah oo lagu dalbado warshadaha safarka, oo bixiya hawo, hoy, dalxiisyo iyo dalxiisyo.
Texas waxay la kulantay burbur baahsan oo deganaansho badan ayaa raadinaya hoy ku meelgaar ah
Expedia waxay furtay bog Deg Deg Deg ah si loo helo hudheelada la heli karo. Isla mar ahaantaana tani waa fursad ganacsi oo soo dhaweyn ah shirkaddan weyn ee alaabooyinka safarka ah.
Si looga caawiyo dadka inay helaan hoyga la heli karo hadda iyo inta lagu gudajiro howlaha soo kabashada, Expedia.com waxay kicisay Xariirka Guryaha Degdegga ah si looga caawiyo bixinta macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee helitaanka hoteelka ee dhammaan Gobolka Texas.
Cimilada daran ee jiilaalka ee Texas waxay sababtay waxyeello baahsan waxaana si cad u caddaatay in dad badan oo deggan laga yaabo inay ka barakacaan guryahooda maaddaama ay sugayaan koronto, biyo ama dayactir lagu sameynayo. Kooxaha Expedia waxay si toos ah ula shaqeynayaan la-hawlgalayaasha hudheelka si loo hubiyo in helitaanka uu sax yahay, mid taagan iyo qiimo caddaalad ah iyadoo lagu dadaalayo in meesha laga saaro wixii walwal ah ee aan daruuriga ahayn ee soo kordhay inta lagu jiro xilli horeba u adkaa.
Shiv Singh, SVP iyo GM ayaa u sheegay Brand Expedia: "Waxaan ku faraxsanahay inaan kheyraadkeena horay u soo qaadno si aan u caawinno kuwa u baahan inay helaan meel amaan ah oo ay ku sii sugnaan karaan hadda iyo inta ay soo kabashada socoto." “Quluubteenu waxay lajirtaa kuwa ay saameeyeen duufaantii jiilaalka ee ka dhacay Texas oo dhan waxaana rajeyneynaa in tani ay gacan ka geysan karto helitaanka meel diiran oo aan xoogaa ku fududaan maadaama aan ka shaqeyneyno in aan kaliya la soo saarin kaydka jira, laakiin sidoo kale geli qiimeyaal si loo hubiyo in qiimayaashu ay ahaadaan kuwo xasilloon oo caddaalad ah. ”
Si aad wax badan uga barato oo u raadsato hoy kuu bannaan, booqo Expedia.com/texas. Sida had iyo jeer ah, deggeneyaashu waa inay u gudbiyaan saraakiisha gurmadka degdegga ah ee deegaanka wixii macluumaad ah ee ku saabsan horumarka ka soo kabashada degaankooda.